Eto ianao: Home / triatra / ES File Explorer Premium Latest Version vaky
ES File Explorer Premium Latest Version vaky
Ny endri-javatra fanampiny nefa nampanaiky fitaovana ho an'ny mpampiasa dia miorim-paka fa afaka hametraka alalana avy ao anatin'ny ES File Explorer File Manager. Ny endri-javatra tsy manam-paharoa ho an'ny lalao olona dia ny rindrambaiko mitranga mivantana haino aman-jery avy amin'ny haino aman-jery hafa fitaovana tia izay tambajotra toy ny PC ve sa Nampahery. Izany dia Multimedia Explorer izay mamela anao playback lahatsary sy ny mozika antontan-taratasy izay efa eo amin'ny fitaovana. Tsy afaka ny fitantanana ny naorina-in fitehirizana ary koa any ivelany fitehirizana toy ny bitika na Flash karatra SD aelin'ny.
ES File Explorer manampy anao amin'ny fanadiovana ny Ads rehetra izay manahirana anao raha misy fangatahana mandeha.
Efa tonga amin'ny lohahevitra vaovao sy ny loko tontonana manome izany rehetra izany ankehitriny endrika.
Tsy afaka ny fanitsiana ny antontan-taratasy mba defrag voazarazara mba hametraka ny antontan-kevitra ho any amin'ny fampirimana izany mba tsy mahazo ny zava-drehetra mahafantatra ny korontana sy ny manana azy ireo araka ny tokony
Misy ny safidy ho anareo ny vaovao farany ny an-mitondra ny datin fandaharan'asa ho azy fotsiny ianao, na tanana tsy maintsy mankarary afaka amin'ny toerana misy anao.
Azonao atao koa ny mpampiasa mampifandray amin'ny asa fanohanana lehibe toy ny rahona mampiditra rakitra fitantanana eo an-toerana seamlessly amin'ny angon-drakitra fitantanana
koa, you can also download plugins for this software to extend the functionality of ES File Explorer Premium Crack that might help you in freeing up some system resources.
Ary, you can also include ES Chromecast which allows you to link the software with chromecast
Azonao atao ny mampakatra sary, mijery filma sy hizara izany amin'ny namana akaiky amin'ny alalan'ny Zipping na rar raki-daza. Decompress any zip or RAR file to get access to the content or any document.
Raha toa ka manana zavatra manokana eo amin'ny fitaovana izay tianao foana manokana noho ny misy antony, tsindrio fotsiny ary mitana ny faharoa ary avy eo dia tsindrio eo amin'ny hoditra, ary tsy misy olona hahita ny tahirin-kevitra izany raha tsy indray. Azonao atao ihany koa nanisy tenimiafina amin'ny rakitra manokana amin'ny alalan'ny fanindriana ny fotsiny Encrypt ary any no mandeha.
Afa-tsy ny alaina .apk amin'ny finday Android ny karatra SD